मेरो उद्देश्य सेवा नै हो – हरिशचन्द्र हमाल, एनआरएन अमेरिकाका उपाध्यक्षका उम्मेदवार – NepalayaNews.com
विद्यार्थीबाट व्यवसायमा फड्को मार्दै एनआरएनतिर
एमाजनको २ अर्ब डलर बराबरको शेयर बिक्री
कोभिड विरोधी खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार छूट दिने अवधारणाको समर्थनमा अमेरिका
अमेरिकामा जुलाई ४ सम्म ७० प्रतिशत वयस्कलाई कोरोना खोप लगाउने बाइडेनको लक्ष्य
सम्बन्ध विच्छेदपछि बिल गेट्सबाट मेलिन्डालाई पाइन् २.४ अर्ब डलरको शेयर
भारत-अमेरिका यात्रा प्रतिबन्ध : कैयौँ भारतीय अमेरिकी नागरिक छुटिन बाध्य
एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन आयोगमा तपाइँ प्रमुख भएको भए सालको बिषयमा के निर्णय गर्नुहुन्थ्यो?
अमेरिकाको व्यापार घाटा बढेर मार्चमा नयाँ उचाईमा
५२ जिल्लामा निषेधाज्ञा, १२ जिल्लामा आंशिक
अमेरिकामा १२ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप लगाईदै
मेरो जन्म दार्चुला जिल्लामा भयो । त्यति वेला पञ्चायती व्यवस्था थियो । कांग्रेसका मान्छेलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्थे । बुवा कांग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो । म ६ महिनाको हुँदा हामीले देश छोड्नु प¥यो । भारतमा शरणार्थी भएर बस्यौं ।
बुवा रामचन्द्र हमाल क्रान्तिकारी विचारधाराको हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक काममा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । बुवाले ०१५÷१६ तिरै स्कुल खोल्नुभएको थियो । उहाँ पञ्चायतको तारो बन्नुभएको थियो । उहाँलाई मार्न खोजेकाले हामी भागेर भारत गयौं । पछि पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्नुभयो । २०२६ सालमा आम माफि भएपछि हामी नेपाल फर्कियौं । हाम्रो बाल्यकालको शिक्षा भारतमै भयो ।
बुवा विकासप्रेमी हुनुहुन्थ्यो । विकासका थुप्रै कामहरु गर्नुभयो । विकासकै कामका सिलसिलामा ०३० सालमा काठमाडौं जाँदा भूगोलपार्कमा भाषण गर्नुभयो । त्यसैक्रममा उहाँलाई समातेर सेन्टर जेलमा राखि मारियो । आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज हितमा लाग्नुहुन्थ्यो ।
बुवाकै समर्पणको भावबाट प्रभावित भएर म पनि राजनीतिमा लागें । नेविसंघको विद्यार्थी राजनीति गरें । सानै उमेरमा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेतालाई चिन्ने अवसर पाएँ । ९ वर्षकै उमेरमा सुवर्णशम्सेरलाई भेट्न पाएको थिएँ ।
बुवासँग म निकै नजिक थिएँ । मेरो माइलो दाइ पनि क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाली कांग्रेस दार्चुला जिल्लाको अधिवेशनको क्रममा शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधीको रुपमा आउदा त्यो बेलामा म उपसभापति थिए ।
मैले आफैले कम्युनिटी सोसाइटी डेभलपमेन्ट नामको एनजिओ खोलेको थिएँ । त्यस अन्तर्गत दार्चुलामा पौढ शिक्षा, वृक्षरोपण गर्ने, गाउँलेहरुलाई सहयोग गर्ने, सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना जगाउने लगायतका काम गरेका थियौं । मैले कानुन पढेको हुँ । गाउँ–गाउँमा निःशुल्क कानुनी सेवा दिने काम पनि गरें ।
जिल्ला विकास समितिमा निर्वाचित सदस्य पनि थिएँ । जिल्लाको राजनीति गरें ।
२०५३ सालमा म अमेरिका आएको हुँ । युएनडिपीले हाम्रो एनजिओलाई उनीहरुको एउटा कार्यक्रममा छनोट गरेर बोलायो । म एनजिओको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नै खर्चमा यहाँ आएँ । त्यहि दौरानमा उच्च शिक्षाको लागि म यहाँ बसें । यहाँ आएर कानुनमा मास्टर्स गरें । पछि परिवारलाई ल्याएँ । छोराले पनि पढाई राम्रो ग¥यो ।
अमेरिकामा एलाएन्स फर डेमोक्रेसीमा सदस्य भएर काम गरें । अरु संस्थाहरुसँग हालेमालो गर्दै काम गरें । अधिकार लगायतका सस्ंथासँग भोलिन्टिएर भएर काम गरें । एनएआरएनमा सन् २०१५ मा बोर्ड मेम्बर भएँ । मेरो काम पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम भएकोले त्यसमा पनि काम गरें । आफूलाई जानकारी भएका कुराहरु बताइदिने काम गर्छु । कसैलाई ट्रान्सलेसन गर्नुप¥यो भने त्यो गरिदिने काम पनि गर्छु ।
मैले एनआरएन अमेरिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छु । हामी अमेरिका आउँदा थोरै नेपाली थिए । म आउँदा यहाँ मलाई धेरै सहयोग पाएँ । खगेन्द्र जिसी, गिरिजा गौतम, केशव सेढाईं, रमेश ढुंगेल, विजय सिग्देल, प्रकाश कोइराला, सोहिल आचार्य, त्यति बेलाका नेपालका राजदूत नरेन्द्रविक्रम शााह लगायतले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । तैपनि संगठनात्मक रुपमा सहयोग गर्ने, त्यो किसिमको नेटवर्क थिएन ।
अहिले सहयोग गर्ने धेरै संस्थाहरु छन् । समस्यामा परेका मान्छेहरुले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म पनि एनआरएनसँग आवद्ध भएँ ।
एनआरएनको उठाएको ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने अभियान मलाई एकदमै मन प¥यो । अर्को कुरा यहाँको लगानी नेपालमा गर्नुपर्छ । यहाँ सिकेको सीप नेपालमा लगाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपालमा त्यस्तो वातावरण निर्माण हुुनुपर्छ । नेपालीको आवाज अमेरिकामा बलियो बनाउनु प¥यो । एनआरएनले नेपालीलाई आपत पर्दा जुन सहयोग ग¥यो त्यसले मलाई प्रभावित बनायो । त्यसकारण पनि म यसमा लागें ।
मेरो उद्देश्य सेवा नै हो । नेपालीहरुको हित कसरी हुन्छ भन्ने नै मेरो सोच हुन्छ । अमेरिकामा नेपालीहरुलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मेरो सोच हो ।
मेरो व्यक्तिगत सोच भनेको नेपाल फर्किएर सामाजिक सेवामा लाग्ने छ । समाजको लागि योगदान गर्न चाहन्छु । मेरो परिवारको पनि यसमा मलाई सहयोग छ । छोराको पनि सहयोगी भाव छ उसले पनि मलाई सहयोग गर्छ ।
नेपालमा संकटकाल नै विकल्प	१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १६:१४
ओलीलाई राजनेता बन्ने ऐतिहासिक अवसर	२४ पुष २०७७, शुक्रबार १५:४०
कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन विदाः असफल भइसकेको अभ्यास	१६ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५४
ऊन्ले सोधे तपाई नै विनोद रोका हो?	१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:४४
ट्र्म्पले चुनाव जित्ने प्राय निश्चित छ. : रविन बज्राचार्य	१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०२:५८
न्यूयोर्क, यूनियन पार्कमा उभिएका महात्मा गान्धी	१७ आश्विन २०७७, शनिबार १४:२२
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार २२:५३
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार २२:२०
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार १५:३८
विद्यार्थीबाट व्यवसायमा फड्को मार्दै एनआरएनतिर १० फाल्गुन २०७३, मंगलवार १५:५५
विष्णुप्रसाद पौडेल । न्युयोर्क नेपालीहरु..
एमाजनको २ अर्ब डलर बराबरको शेयर बिक्री १० फाल्गुन २०७३, मंगलवार १५:५५
कोभिड विरोधी खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार छूट दिने अवधारणाको समर्थनमा अमेरिका १० फाल्गुन २०७३, मंगलवार १५:५५